Messi oo si cad u sheegay tartanka ugu muhiimsan ay Barcelona dooneyso xilli ciyaareedkan inay ku guuleysato – Gool FM
(Barcelona) 16 Okt 2019. Kabtanka kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Argantina ee Lionel Messi ayaa maanta gudoomay abaal-marinta Golden Boot ee ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan Yurub xilli ciyaareedkii hore 2018/2019.
Lionel Messi ayaa xilli ciyaareedkii hore dhaliyay 36 gool ee horyaalka La Liga ah, wuxuuna abaal marintan ku guuleystay markii saddexaad oo xiriir ah iyo markii lixaad ee xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta ah.
Yeelkadeeda, Lionel Messi ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyka “Marca” ee dalka Spain kaddib markii uu ku guuleystay abaal-marinta Golden Boot wuxuu kaga hadlay dhowr arrimood ay ugu muhiimsanaayeen waxyabaha ugu muhiimsan ay dooneyso Barcelona in xilli ciyaareedkan ay ku guuleysato.
“Waxaan dooneynaa inaan soo bandhigno xilli ciyaareed aan caadi aheyn, Barcelona ahaan waxaan dooneynaa inaan ku guuleysano wax walba, La Liga, Copa del Rey iyo Champions League”.
“Champions League waa tartan muhiim inoo ah, laakiin horyaalka La Liga ayaa muhiimada koowaad inoo ah waxaana dooneynaa inaan ku guuleysano”.